News Archives - Page 20 of 336 - Myanmar Fire Services Department
House fire occurred at Pathin township, Ayeyarwaddy region
editor | Nov 24, 2020 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
Nov 22 2020, at about 03 40,afire broke out at the house starting from the burning wood at the chamber where the wooden oven are kept for baking. The fire accident happened at the No5ward, Pathein township, Ayeyarwaddy region. The fire was firstly seen from the...
Two vehicle collision after U turn
editor | Nov 22, 2020 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
Nov 21 2020, at about 16 00, two vehicle collision happened between the mile post no (344/3) and (344/4) of the Naypyitaw-Mandalay highway road, Tadaoo township, Mandalay region, whenaNissan vehicle madeaU turn to head to the other way and crashed the ISUZU car on...
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သဲကုန်းမြို့နယ်၊ အင်းမမြို့၊ သီရိမင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းဟောင်း မိုင်တိုင်အမှတ် ( ....
၂၁.၁၁.၂၀၂၀ရက်နေ့၊ ၀၂ ၃၀အချိန်ခန့်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သဲကုန်းမြို့နယ်၊ အင်းမမြို့၊ သီရိမင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းဟောင်း မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၅၁/၅)နှင့် (၁၅၁/၆)ကြားတွင် ယာဉ်မောင်း ဦးအောင်ချိုအေး မောင်းနှင်လာသော ယာဉ်အမှတ် TOYOTA HIACE အမျိုးအစား(အဖြူရောင်)ယာဉ်သည်...
မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ ပိန်းနဲကုန်းကျေးရွာရှိ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဈေး မီးလောင်မှုသတင်း
editor | Nov 22, 2020 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
၂၁.၁၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၁ ၄၅အချိန်ခန့်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ ပိန်းနဲကုန်းကျေးရွာရှိ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဈေးတွင် ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဒေါ်ဆိုင်နား၏ (၇×၆)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ မြေစိုက်ဆိုင်ခန်း၌ ဆပ်မီတာအပူလွန်ကဲရာမှ အနီးရှိ ပျဉ်ကာသို့မီးကူးစက်လောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း ၀၁...
နေပြည်တော်၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် – မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၂၄၉/၃) နှင့် (၂၄၉/ ၄)ကြားတွင် ယာဉ်တိ ....
editor | Nov 21, 2020 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၅ ၂၀ အချိန်ခန့်၊ နေပြည်တော်၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် – မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၂၄၉/၃) နှင့် (၂၄၉/ ၄)ကြား၊ နေပြည်တော်ဘက်မှ မန္တလေးဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ကိုကျော်ဦး မောင်းနှင်သည့် Honda Odyssey အမျိုးအစား (အဖြူရောင်) ယာဉ်သည်...
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် – မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၄၆/၆)နှင့်(၁၄၆/၇)ကြားတွ ....
၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၂ ၃၀ အချိန်ခန့်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် – မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၁၄၆/၆) နှင့် (၁၄၆/၇)ကြား၊ ရန်ကုန် မှ နေပြည်တော် သို့ ယာဉ်မောင်း ကိုတင်မွေး မောင်းနှင်သည့် Sojen အမျိုးအစား (အဖြူရောင်)ယာဉ်သည်...
Page 20 of 336« « Previous...10...1819202122...304050...Next »